WARBIXIN:Liverpool & Chelsea Oo Hogaaminaya 8 Kooxood Oo Wareega Group-yada Kaga Hadhi Kara Champions League Todobaadkan – Kooxda.com
HomeChampions League WARBIXIN:Liverpool & Chelsea Oo Hogaaminaya 8 Kooxood Oo Wareega Group-yada Kaga Hadhi Kara Champions League Todobaadkan
WARBIXIN:Liverpool & Chelsea Oo Hogaaminaya 8 Kooxood Oo Wareega Group-yada Kaga Hadhi Kara Champions League Todobaadkan
December 10, 2019 Abdiwali Adan Jamac Champions League, Wararka Maanta, Warbixino 2
Waxa salaasada iyo Arbacada la ciyaari doonaa tartanka champions league iyada oo waliba la ciyaari doono kulankii ugu dambeeyay ee wareega Group-yada tartanka xilli ciyaareedkan.
Waxa jira kooxo badan oo haatanba iska xaadiriyay ama goostay tigidhkooda wareega 16-ka tartanka champions league xilli ay kooxo kale salaasada iyo Arbacada u soo bixi doonaan inkasta oo ay ku xidhantahay shuruudo.
Waxa jira 8 kooxood oo waaweyn oo wareega Gorup-yada kaga hadhi doona tartanka champions League xilli ciyaareedkan waxana aan halkan hoose ku soo bandhigi doonaa qaabka ay u dhici karto arintaas.
Kooxda Atleltico Madrid ayaa Group-yada kaga hadhi tartanka tartanka champions League xilli ciyaareedkan, Atletico ayaa leh 7 dhibcood waxana ay kulanka ugu dambeeya la ciyaari doontaa kooxda Lokomotiv Moscow dhanka kale kooxda Bayer Leverkusen ayaa leh 6 dhibcood waxana ay la ciyaari doontaa kooxda Juventus.
Hadii ay Bayer Leverkusen garaacdo Juventus sidoo kale Atletico Madrid guuldaro ama bar-baro la gasho kooxda Lokomotiv Moscow Waxa ay kooxda reer Spain si Rasmi ah uga hadhi doontaa tartanka.
Kooxda Liverpool ayaa tartanka wareega Group-yada kaga hadi doonta hadii ay guuldaro kala kulanto kooxda RB Salzburg Sidoo kale Napoli ka badiso kooxda Genk iyada oo Reds goolal uga hadhi doonta tartanka.
Dhanka kale kooxda Napoli ayaa tartanka ka hadhi doonta hadii ay RB Salzburg Ka badiso Liverpool sidoo kale Iyagu guuldaro kala kulmaan kooxda Genk.
Kooxda Inter Milan ayaa ka hadhi doonta tartanka champions League hadii ay guuldaro kala kulmaan kooxda Barcelona sidoo kale Borussia Dortmund garaacdo kooxda Slavia Prague halka ay hadii ay Inter Milan bar-baro la gasho Barcelona isla markaasna Borussia Dortmund ka badiso kooxda Slavia Prague sidoo kale Inter Milan ka hadhi doonto tartanka.
Sidoo kale Borussia ayaa ka hadhi karta tartanka hadii ay Guuldaro kala kulanto kooxda Slavia Prague sidoo kale Inter Milan badiso ama bar-baro la gasho kooxda Barcelona halka hadii ay Inter iyo Dortmund bar-baro la gala galaan Barcelona iyo Slavia Prague ay Inter Milan goolal ku soo bixi doonto.
Group-kan ayay 3-da kooxood ee Ajax, Valencia iyo Chelsea midkood ka hadhi karaa tartanka marka loo eego in ay aad isugu dhibco dhawyihiin.
Chelsea ayaa u baahan guul ay ka gaadho kooxda Lille si ay u soo baxdo iyada oo kooxaha Ajax iyo Valencia midkooda badiya soo bixi doono dhanka kale hadii ay chelsea bar-baro la gasho kooxda Lille laakiin ay Valencia guuldaro kala kulanto kooxda Ajax ay sidoo kale Blues soo bixi karto.
Kooxda Lampard ayaa ka hadhi doonta tartanka hadii ay guuldaro kala kulanto kooxda Lille sidoo kale Valencia badiso ama bar-baro gasho.
Dhanka kale Ajax ayay adagtahay in ay ka hadho tartanka maadama loo baahan yahay in ay chelsea iyo Valencia ku badiyaan min 8 gool hadii ay doonayaan in ay Ajax ka hadho tartanka.
Sii Akhriso: Arimaha Ugu Muhiimsan Ee Bur-Buriya Jacaylka Lamaanaha
Mane, McTominay, Solskjaer, Eriksen, Emery, Aubameyang & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga
Paris Saint-Germain Oo Go’aan Ka Gaadhay Mustaqbalka Neymar, Maxaa Soo Kordhay?
Beentaa weeye sheekhaw hadii Chelsea bidiso Valencia na bidiso waxa soo baxaya Chelsea iyo Valencia
Chelsea gul inshallah.
Salzburg iyo Napoli bidiyaan